NEO Turf Masters, yechinyakare yeNOGOO pane yako iPhone kana iPad | IPhone nhau
Makambani ekuwedzera uye mazhinji ekuvandudza ari kusarudza kutevedzera kana kuchinjika. DotEmu inozviziva chaizvo, kambani iyo, yakavakirwa pane emulators, iri kuwana zvakawanda kubva kuApp App Store. Kuwedzera kwake kwazvino ndiko NEO Turf Masters, yechinyakare yeNOGOO inouya kune yedu iPhone nePadhaa kuti tiite nguva yakanaka. Senguva dzose, idzi mhando dzemitambo yeimwe mhando uye pasina zvakabatanidzwa kutenga, zvine mutengo. Nekudaro, ivo nyanzvi kwazvo mumutambo uyu wevhidhiyo, kana angangoita muhondo, vachange vachidisisa kubhadhara izvo zvinodhura.
Tichibata ruoko pakati peiyo arcade uye simulation, uyu mutambo wevhidhiyo wakatipa maawa mazhinji ekunakidzwa munhandare, saka zvingava sei neimwe nzira, pane nhare mbozha (iyo yekuvaraidza yezana ramakumi maviri nenomwe), haigone kusavapo. Vaya vezera rakati vachayeuka ipapo mutambo unozivikanwa kwazvo uyo DotEmu unotisimudzira seizvi:
Iyo inozivikanwa yegorofu mutambo weNeOGEO yadzoka, mune vhezheni nyowani yefoni ine kubata kwekubata! NEO TURF MASTERS (inozivikanwawo se "BIG TOURNAMENT GOLF" muJapan) ndeye arcade classic yakaratidza chizvarwa chose.
Vanozviisa mushangu yemumwe wevatanhatu epasi rose gorofu kukwikwidza pamakosi akasiyana pasirese, vatambi vanosarudza kirabhu, vanoongorora mafambiro emhepo uye vanotsvaga nzira yakanakisa yekupedzisa gomba roga roga nemavanga mashoma. Zvikurukuru yakashandurwa yeIOS nhare mbozha, iyi vhezheni nyowani inopa akawanda maficha maficha pasina kusiya mweya wekutanga wemutambo.
Mutengo i € 2,99 nguva dzose, Hazvina kudhura chaizvo kana tichifunga kuti mutambo wakasarudzika chaizvo uye kuti haunawo zvakabatanidzwa mukutenga. Inoturikirwa mumitauro isingagumi, inongobata 37 MB chete, uye kuve yepasirese, tinogona kuishandisa pane chero eedu maIOS zvishandiso neIOS 7 kana kupfuura. Ongororo dzauri kugashira paIOS App Store dzakanaka, saka usarasikirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » NEO Turf Masters, yechinyakare yeNOGOO pane yako iPhone kana iPad
Pakazosvika nguva yakasarudzika yehupenyu hwese, anga ari mune emulators emu Android kwemakore uye akatenderedza mativi aya hapana kana chinhu.
Ndinoshuva kuti dai vaizovaburitsa kunze vangave vakanaka !!